Cishe wonke umuntu uyazi mayelana nokuba khona kwamakamu welithi "ukudla kosher". Kuyini lokhu eside? Kusho ukuthini? Umqondo imikhiqizo kosher kufika kithi evela Israyeli. Kulapho kukhona isethi eqinile kwemithetho ethize kanye neziqondiso kuzo amaJuda yenkolo - halacha. Lokhu uhla lwemigomo ihlanganisa izisekelo kokubili umndeni kanye ekuphileni okungokwenkolo kwabantu kanye nomphakathi. welithi "kosher" elikhona halacha. Kuvumeleke bayafaneleka futhi yini izimpilo amakholwa.
Imithetho kashrut banamathela amaJuda lapho ukhetha imikhiqizo ukulungiswa izitsha ezahlukene. Bona balawule imithetho yesonto futhi izindlela yokugcina ukudla. Ngamanye amazwi, ukulawula izinga ukudla kosher kokuba kanzima ngempela. It lucwaningo eziyikhulu namashumi izinhlangano ayisikhombisa akwa-Israyeli, ngamunye ephethe wokunyathelisa zayo futhi. Kuleso simo, uma ukudla ihlangabezana kosher, ngeke ukwazi ubani ofuna ukuzama it. Umkhiqizo zizomakwa nesinye salezi lwezimpawu.
ukudla Kosher - ukuthi lo mqondo kuhlanganisa? Ukudla amaJuda yenkolo kufanele adle ngokuvumelana Halacha mithetho ihlanganisa:
- "inyama" (imikhiqizo inyama);
- "Halal" (nemikhiqizo yobisi);
- "parve" (imikhiqizo hlangothi).
Kusho ukuthini ukudla kosher Basar? Lena inyama yezilwane. Futhi "inyama" eside kuphela ofanele ruminant ezidla uhlaza ngamasondo eziyivulayo, engokwemvelo okuyinto ezweni. Ngakho, izilwane kosher zihlanganisa izinkomo, izimvu, izimbuzi kanye nezinyamazane, izindlulamithi kanye elks. Akufakiwe kulolu hlu izingulube, onogwaja, namakamela. Ukuze ube inyama kosher akumele zibe igazi. umthetho sezenkolo kulesi sici ufuna zilandelwe ncamashi. Kukholakala ukuthi udla ukudla ngegazi (ngisho noma kuqukethwe iqanda njengoba ihlule) asenza sicabange abantu unya.
Izinkukhu ohlwini kosher kuhlanganisa kuphela amakalikuni amadada, izinkukhu namahansi, amajuba. Amaqanda kuvunyelwa umthetho zenkolo ukuba zidliwe umuntu, kufanele abe eziqondile komunye umkhawulo oyindilinga. Fish, kubhekwe Kosher, sinezici ezimbili. Kumele ezinamaphiko nezingcwecwe izikali. Ukudla izinambuzane, izimpethu nezinyoka halacha akuvunyelwe.
Imikhiqizo yobisi, okuyinto uvumelane umqondo ukudla kosher, kuyini na? Uhlu "Halal" kuhlanganisa kuphela ukudla ubhekwa ahlanzekile. Ngamanye amazwi, imikhiqizo yobisi kumele itholwe kuphela ezilwaneni kosher.
imikhiqizo Ngiphakathi nendawo efanelekayo ethemini ukudla kosher, kuyini na? "Parve" - kuyinto izithelo nechervivye nemifino. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo kokungathathi hlangothi avunyelwe ukudla imithetho yenkolo kuphela uma bengakwazi ukuxhumana ukudla non-kosher. Isibonelo, akuvunyelwe ukuzitika on utamatisi ezigcotshwe nesinqumela.
ukudla Kosher kuvamile kakhulu kwa-Israyeli. Nokho, umkhuba osukhona eminyakeni yamuva iye kancane kancane kokushintsha. Kakade kwakukhona ukudla kosher eMoscow. Iphuzu lapha akukhona ukwandisa isibalo amaJuda ahlala enhlokodolobha. abantu nje ngaphezulu inamathela ukubaluleka nokudla okufanele futhi unempilo.
Izitsha uzilungiselele kusuka imikhiqizo sokuhambisana kashrut, inikeza inqwaba zokudlela eMoscow. Futhi isibalo izikhungo ezifana ukhula kancane kancane unyaka nonyaka. I Izmailovo nambitha ukudla ngokulandela uhlu lwezincwadi zeBhayibheli benkolo bamaJuda, kungaba "Eshel" isikhungo. On the Boulevard anemibala, ungavakashela yokudlela "Tel Aviv", futhi Landscape Arc coffee shop "Chocolate" ngeke Ukukhetha eziningi imikhiqizo kosher yobisi ukunikela.